Imaaraadka Carabta oo xayiraad kusoo rogay wadamo ay ku jirto Soomaaliya
Imaaraadka oo xayiraad kusoo rogay dalal ay ku jirto Soomaaliya
ABU DHABI, UAE – Imaaraadka Carabta ayaa Arbacadii wuxuu si ku meelgaar ah u joojiyey in uu dal ku gal siiso dadka ka imaanaya Soomaaliya iyo 11 dal kale, sidda ay ku warantay warbaahinta maxaliga ah ee waddankaas.
Sidda ku xusan warbixinadda ay tabineyso warbaahinta, go'aankan ayaa la xiriira soo-rogaal-celiska uu sameynayo fayruska Corona.
Liiska dowladaha ay saameyneyso xayiraadda ayaa waxay kala yihiin; Turkey, Iran, Yemen, Syria, Iraq, Pakistan, Libya, Kenya iyo Afghanistan.
Inkasta oo aan lasoo bandhigin xilliga la qaadayo xayiraadaas, haddana waxaa la sheegay in ay sii jireyso illaa iyo amar dambe uu kasoo baxayo.
Soomaaliya ayaa laga diiwaan-geliyey kiisas Covid-19 oo tiradoodu gaareyso 4,301; dadka ka bogsaday waxay mareysaa 3,330, halka dhimashadda lagu waramay in ay sii cagacageyneyso 107 marxuum Soomaali ah.
Guud ahaan caalamka, kiisaska Covid-19 ayaa ka badan 55 milyan ruux, halka bogsashadda ay tahay 35 milyan, halka geerida ay tahay 1.34 milyan.
Hay'adda Caafimaadka Aduunka ee loo garan-og-yahay WHO ayaa waxay ugu baaqdey dowladaha in ay qaadaan talaabo kasta oo ay u arkaan in looga baaqsan karo in saameynta fayruska ay gaarto bulshada qeybteeda nugul.
Somaliland oo baabi'isay heshiis ay la gashay Imaaraadka Carabta
Somaliland 14.09.2019. 14:12
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay arrintan.
Imaaraadka oo Digniin amni kasoo saarey Xaalada Soomaaliya
Caalamka 20.06.2018. 11:08
Nin isagoo Xabsi ku jira ku guuleystay tartan Qur'aan akhris
Caalamka 17.03.2019. 16:26
Ururada siyaasadda Puntland oo loo diray fariin la xiriirta Covid—19
Puntland 09.04.2020. 19:45